दुई पार्टीको एकता भइसक्यो, अब कमिटीमा एक गर्न मात्र बाँकी छ- जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ – Janaubhar
दुई पार्टीको एकता भइसक्यो, अब कमिटीमा एक गर्न मात्र बाँकी छ- जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’
प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर १८, २०७४ | 158 Views ||
पूर्वगृहमन्त्री एवं नेता नेकपा माओवादी केन्द्र
पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत तपाईले पहिलो पटक आफैलाई मतदान गर्नुभएको छ । कस्तो अनूभूति भएको छ ?
संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सहित हामी निर्वाचनमा छौं । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन भइसकेको छ । आगामी मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनबाट हामीले जनताबाट अभिमत लिएका छौं । हामीले प्राप्त गरेको मत पनि मंसिर २१ गते पछि मात्र गनिने छ ।
मैले पहिलो पटक आफूले आफैलाई मतदान गरेको छु । विगतमा मैले आफैलाई मत हाल्न पाएको थिएन । अहिले मैले आफैले आफूलाई मतदान गर्ने अबसर प्राप्त गरें । विगतमा हामीले संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्यौं । अब हामीले संविधान कार्यान्वयनको जिम्म लिनुपर्ने छ ।
जनताले तीनवटा कुरा माग गरेको छ । पहिलो कुरा जनताले अब समृद्धि खोजेको छ । मुलुक समृद्ध बनाउनको लागि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने छ । हामीले स्वच्छ जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने भनेर पनि ध्यान दिनुपर्ने छ ।
हामीले स्वास्थ्य क्षेत्र क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्नेछ । उत्पीडित वर्ग समुदायले सामाजीक न्याए खोजेको छ । त्यसैगरी जनताले शान्ति सुरक्षा खोजेको छ ।
हामीले शान्ति सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । अनुशासित र सम्भय समाज कसरी निर्माण गर्ने भनेर हामीसँग चुनौती छ । हामीले यी चिज सम्बोधन गर्ने गरी मैले जनतासँग छलफल गरे ।
मैले यस पटक खासै प्रचार प्रसार गरेन । माइकिङ गर्ने काम पनि गरेन । मैले पोष्टर, पम्पलेट पनि तयार गरेन । मैले घोषणापत्र मात्र तयार गरेको थिएँ । घोषणापत्रको आधारमा मैले मत मागेको छु । मैले अबको पाँच वर्ष भनेर घोषणा पत्र तयार गरेको छु । त्यसमा अबको पाँच वर्ष रुकुमलाई कस्तो बनाउने ? भन्ने उल्लेख गरेको छु । त्यही आधारमा मलाई जनताले मतदान गर्नुभएको छ ।
मत परिणमको कस्तो आँकलन गर्नुभएको छ ?
करिब ५४ हजार ३–४ सय मत खसेको छ । त्यसमा कम्तिमा पनि ३५ देखि ४० हजार मत गठबन्धनले पाउँछ भन्ने हाम्रो आँकलन छ ।
तपाईले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । गठबन्धनको विषयमा लिएर बजारमा विभिन्न टिकाटिप्णी पनि आइरहेका छन् । गठबन्धनको खास उद्देश्य के हो ?
अहिले केही नबुझ्नेहरुले यसलाई अधिनायकवाद भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । कुनै पनि व्यक्तिले जनताको अभिमत नलिएर शासन लाद्ने कुरा नै अधिनायकवाद हो । हामी त्यो दिशातर्फ छैनौं । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार जनताको समानुपातिक मत लिएर जनतालाई शासन गर्ने कुरा संविधानमा लेखिसकेका छौं । हामीसँग दुई तिहाई मत छ । दुई तिहाई मतद्वारा हामीले जनतालाई शासन सत्ता चलाउने कुरा गर्दैछौं । यो कसरी अधिनायकवाद हुन्छ । राजनीतिको परिभाषा नबुझ्नेहरुले गर्ने तर्क हो त्यो ।
गठबन्धनको मुल उद्देश्य भनेको राष्ट्रको समृद्धिले गर्ने नै हो । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुदृढीकरण नै गठबन्धनको उद्देश्य हो । समाजलाई सामाजिक न्यायसहितका समाजवादमा पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य हो ।
तपाईहरुले गठबन्धनलाई पार्टी एकताको तहसम्म पु¥याउने भन्नुभएको छ । पार्टी एकताका आधारहरु के के हुन् ?
पार्टी एकताका आधार विचार, संगठन र जनता नै हो । तीनवटै कुरा नै प्रमुख आधार हुन् । तीनवटै आधारमा हामी आन्दोलनमा लड्दै भिड्दै आयौं । संविधान निर्माण गर्दासम्म संविधानका एजेण्डाहरुमा हामी एक ठाउँमा छौं । हामी आगामी दिनहरुका लागि र विगतको मूल्यांकनमा हाम्रो सहमति छ । हामीले विगतमा खेलेका भूमिका र आ आफ्नो तर्फबाट खेलिएका भूमिकाहरुलाई दुबैले सही ढंगले मूल्यांकन गर्ने हामीबीच सहमति भइसकेको छ ।
हामीबीच पार्टी एकता भइसकेको छ । हामी यो अभियानमा एक ठाउँमा भएर अघि बढीसक्यौं । निर्वाचन अभियानले कार्यकर्ता तहमा पार्टी एकता भइसकेको छ । माथि पनि लिडरहरुबीच पनि एकता भइसकेको छ । अब प्राविधिक रुपमा रहेका दुई वटा कमिटीलाई एउटै कमिटीमा बदल्न जरुरी छ । त्यो कुरा हामीले निर्वाचन पछि गर्छौं ।
दुई वटै पार्टी फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । तपाईले पार्टी एकता भइसक्यो भन्नुभएको छ तर, दुबै कमिटी एक गराउँदा कार्यकर्ता व्यवस्थापन र उनीहरुबीचको भावनात्मक एकता हुन केही चुनौति हुने देख्नुहुँदैन तपाई ?
फरक–फरक पार्टी होइनन् । एउटै मुहानबाट पैदा भएका फरक–फरक पार्टी हुन् । हाम्रा संस्थापकहरुले फरक–फरक पार्टी गठन गर्नुभएको थिएन । उहाँहरुले एउटै पार्टी गठन गर्नुभएको हो । त्यसको विकासका क्रममा यी पार्टीहरु फरक फरक किनारा वा बाटोबाट अघि हिडे । फेरि एउटै विन्दुमा गएर पार्टीहरु मिलेका छन् ।
एउटै पार्टीभित्र पनि समस्या हुन्छ । फरक फरक पार्टी मिलाउँदा केही समस्या त होलान् । तर, हामीले बृहत हितका लागि र राष्ट्रको हितका लागि पार्टी भित्रका केही समस्याहरु हाम्रा लागि सामान्य हुन् । तिनलाई हामीले सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । यी कुरा वैचारिक र संगठनात्मक ढंगले हामीले वैज्ञानीक रुपमा हल गर्ने छौं ।
आफूलाई मतदान गरेलगत्तै चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुन तपाई दाङ झर्नुभएको छ । केही समय पहिले प्रदेशको सिमांकन गर्दा प्रभाकरले रुकुमलाई टुक्रायो भनेर तपाई विरुद्ध नारावाजी नै गरियो । दाङमा पनि प्रभाकरका कारण प्रदेशको राजधानी दाङ नहुने भयो भनेर कतिपय सडकमा समेत आए । तर, अहिले तपाई प्रदेशको राजधानी दाङ हुन्छ भनेर अभियानै चलाइरहनुभएको छ । प्रदेश राजधानी दाङ हुने आधार के देख्नुहुन्छ तपाई ?
रुकुम जोडिदा मात्रै दाङ राजधानी हुन्छ भनेर यहाँका केही साथीहरुलाई लागेको थियो । रुकुम भए दाङ राजधानी हुने होइन । आफ्नै वस्तुगत अवस्थाका कारण दाङ राजधानी हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ । मैले भनेको कुराका आधारमा दाङ राजधानी हुन्छ । अरु आधारमा दाङ हुँदैन भनेर मैले त्यतिबेला भनेको थिएँ । मैले त्यतिबेलै यो कुरा तपाईले अहिले बुझ्नुहुँदैन पछि बुझ्नुहुन्छ भनेर भनेको थिएँ ।
रुकुम टुक्रिएको होइन । रुकुम विस्तार भएको हो । रुकुम एउटै जिल्ला थियो । मैले सबै मत पाउँथे । बहुसंख्यक जनता मलाई मत हाल्ने हुनुहुन्थ्यो । तर, ती जनताले हामीलाई रुकुम छुट्टै चाहिन्छ भनेर माग गर्नुभयो । मैले आफ्नो मतदाता काटेर भए पनि अर्को जिल्ला बनाउने पहल गरें । र, अहिले तीन÷तीन जना गरेर छ जना प्रतिनिधि चुनिने भनेको रुकुमका जनताले गरेका बलिदानी र योगदानको कदर गरेको हो संविधानले । त्यतिबेला मलाई ढुंगा पनि हानियो । तोडफोड पनि गरियो । ती कच्चा राजनीतिक व्यक्तिहरु थिए । उनीहरुको बाल हठले काम गरेको थियो । उनीहरु कसैले हाल्देको कुरामा लागेका थिए । उनीहरुले तथ्य बुझे अहिले । ती विरोध गर्नेहरु पनि अहिले खुशी छन् ।
दाङलाई राजधानी बनाउने कुरामा मैले जे कुरा भनेको थिएँ, मैले आफू पदमा रहँदा त्यो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको छु । म गृहमन्त्री हुँदा मैले दाङमा प्रदेशको प्रहरी मुख्यालय स्थापना गरेको छु । हामीले उच्च अदालत तुलसीपुरमा स्थापना गरेका छौं ।
अन्य हिसाबले पनि दाङ राजधानी हुने प्रशस्त आधार छ । सामरिक हिसाबले पनि दाङ प्रदेशको राजधानी हुन उपर्युक्त छ । भौगोलिक र पूर्वाधारको आधारमा पनि दाङ राजधानी बन्न उपर्युक्त छ । सबै कुरा मिलेको छ । हाम्रो पनि पहल छ । मैले दाङ राजधानी हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँका जनतासँग अन्र्तक्रिया गरेको छु । यहाँका व्यवसायी र नेताहरुसँग पनि छलफल भएको छ । मेरो पहल रुकुमलाई ६ नं प्रदेशमा हाल्दा पनि थियो र अहिले पनि छ ।
फेरि पनि भन्छु– ५ नं. प्रदेशको राजधानी दाङ नै हुन्छ । अरु ठाउँका नागरिक वा नेताले आफ्नो ठाउँका लागि लविङ गर्न पाउँछन् तर राजधानी सबै हिसाबले उपयुक्त, वस्तुनिष्ठ र सही ठाउँमा हुन्छ, त्यो ठाउँ भनेको दाङ नै हो ।
म दाङका सम्पूर्ण मतदाताहरुलाई अपील गर्न चाहन्छु– वाम गठबन्धनका सबै उम्मेदवारहरुलाई अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनुहोस्, हामी तपाईंको ठाउँलाई प्रदेश राजधानी मात्रै हैन सबै हिसाबले पश्चिम नेपालकै केन्द्र बनाउन सचेत पहलकदमी बढाइरहेका छौं । यो पहलकदमीलाई हामी निष्कर्षमा पु¥याएरै छाड्छौं ।
Prevहाम्रो जितले प्रदेशको राजधानी दाङ सुनिश्चित हुन्छ- शंकर पोख्रेल
Nextअब दाङको समृद्धिको नेतृत्व म गर्छु- कृष्णबहादुर महरा